Wonke umuntu wesifazane uyazi ukuthi kubaluleke kangakanani ukuba ukhethe umzimba efanelekayo umuthi yayo. Okwamanje, ukukhethwa imikhiqizo enjalo omkhulu, kodwa labo eziqukethe esincane hormone, babe Izimo ezimbalwa futhi bahlangabezane nezindinganiso yesimanje, kungasiko. in nje isikhathi nabo, ingafaka esebenzisa "Jazz". Amaphilisi hhayi kuphela ukusiza ukuvimbela ukukhulelwa okungafunwa, luwathathe ngokuphepha kuthinta isimo jikelele zomzimba.
Umuthi itholakala amaphilisi, ifilimu-camera. ezisebenzayo ukubunjwa yabo yilezi: ethinyl estradiol (njengoba betadeks clathrate) - 0.02 mg kanye drospirenone - 3.00 mg. Izingxenye asizayo zihlanganisa: monohydrate lactose, corn isitashi, magnesium stearate.
Tablets "Jazz" - basuke iningi Izibuyekezo akhayo - ezihlobene temlomo umuthi i-hormone izidakamizwa. Ezithathwe ngomlomo ukuvimbela ukukhulelwa okungafunwa futhi kuphela ngaphansi izincomo wezokwelapha.
antimineralkortikoidnym Lokuvimbela Inzalo kanye kunemiphumela antiandrogenic. Suppresses nge-ovulation ngenxa ushintsho oluthile loketshezi wesibeletho, okuyinto kuba viscous futhi ayikuvumeli isidoda ukungena.
Uma uthatha amaphilisi, "Jazz", ukubuyekezwa okuyizinto ngempela eziphikisanayo, ngokuvumelana isikimu ezichazwe manual, khona-ke ematfuba kokukhulelwa phezu Pearl Index esingaphansi 1, kodwa aphuthelwe ngamunye ngokuthatha izidakamizwa kwandisa izinga.
"Jazz" (zokuvimbela inzalo amaphilisi) abe izinkomba kanye contraindications zabo, okuyinto yokubona ukwenaba komusa isicelo sabo.
Ngakho, umuthi wabonisa ngokuba ngokuvikela ukukhulelwa okungadingekile. It liyasetshenziswa aphathe induna ka kobukhulu nokulinganisela esiqoshiwe premenstrual syndrome Pill "Jazz".
Ukufundiswa uthi ukusetshenziswa yabo kufanele wenqabe nge emithambo yegazi lwemithambo thrombosis, thromboembolism, iziyaluyalu cerebrovascular. Ungayisebenzisi nabo isimo esandulele thrombosis. Sikhuluma izifo zenhliziyo ezifana kuhlasela ischemic, arrhythmia, angina, ukungasebenzi valve inhliziyo, fibrillation atrial. Izimo ukusetshenziswa kwezidakamizwa ubuhlungu bekhanda, isifo sikashukela, izifo umsebenzi ebuchosheni futhi yenhliziyo Umthambo isifo. Awukwazi ukusebenzisa ikhambi ngesimo engalawuliwe umfutho wegazi ophakeme, imisebenzi kusuka immobilization isikhathi eside ababhemayo abaneminyaka engu-35.
Odokotela musa batusa ukusetshenziswa kwezidakamizwa ukuhluleka kwezinso, isifo sesibindi, adrenal, izimila hormone, ukopha lwesitho sangasese sowesifazane phakathi nokukhulelwa kanye lactation.
Kufanele ayeke ukuthatha izidakamizwa uma hypersensitivity kuya izinto asebenzayo futhi asizayo ngo ngezithako zawo.
Uma ngesikhathi ukuthatha amaphilisi kukhona ukungakhululeki, ukopha, ayeke nomjikelezo wokuya esikhathini, kanye izenzakalo ezifanayo, ukuthi reception yabo kufanele kugwenywe, futhi ukuqhubeka Yiqiniso kuphela ngemva kokuthintana udokotela wezifo zabesifazane.
Ezimweni lapho izidakamizwa kumele kusetshenziswe ngokuqapha
Akubalulekile ukwabela ngokwabo siqu control lokuzalwa amaphilisi abo "Jazz". Uphenyo ukuthatha leli thuluzi abesifazane bathi mayelana amazinga yakhe ongaphakeme hormone. Thatha ngokuqapha noma ukhetha ukungabuthinti nhlobo kuyinto ukulahla ukusetshenziswa kwazo uma:
nezici ezithile ukuze thrombosis, thromboembolism;
ukubhema, thrombosis, isilethikusebenza, ukwehluleka cerebral kokuphakelwa kwegazi ohlelweni, iyiphi degree yokukhuluphala, dyslipoproteinemia, migraine, umfutho ophakeme wegazi, izifo zenhliziyo valve, arrhythmias, immobilization isikhathi eside, ukuhlinzwa, ukuhlukumezeka okukhulu;
iziyaluyalu kwegazi neuropathy. Lokhu sikashukela kwanoma yiluphi uhlobo, Libman-Sacks isifo, hemolytic uremic syndrome, ukuvuvukala pheshana emathunjini, izilonda, nesifo, phlebitis, isikela cell anemia;
iyiphi izifo kwesibindi kanye GI ipheshana;
jaundice, cholestasis, otosclerosis, eSydenham chorea, cholelithiasis, porphyria.
Kufanele uyeke ukuthatha imithi ekwehliseni isikhathi kwangemva kokubeletha.
Tablets "Jazz": isitatimende
ukusetshenziswa Lokuvimbela Inzalo ngaphakathi ngamanzi. Umuthi owenziwa omunye futhi ngesikhathi esifanayo. Dragees okufanele zithathwe ngamunye ngamunye bebheke umcibisholo, okuyinto edwetshwe i ibhamuza aluminium, ukuze ugweme ukudideka. Vele iphakethe iqukethe amaphilisi 28.
Ngokuvamile umjikelezo wokuya esikhathini uwubufakazi uqala ngosuku wesibili noma wesithathu emva kwezinsuku zokugcina wokusetshenziswa okusebenzayo amaphilisi, kulandele ezinsukwini ezilandelayo ezingu-amane ukuphuza amaphilisi amane dummy eliqukethe akukho isithako esebenzayo.
Akubalulekile ukwenza ikhefu phakathi ubudala kanye iphakethe entsha ye izidakamizwa. Ukuthatha amaphilisi kusuka iphakheji elisha kumele kwenziwe ngosuku olulandelayo ngemuva kokuphela amaphilisi zokugcina besahlanganyela iphakethe asendulo, yize ngaleso sikhathi lwenyanga ayizange yaphela. Ngenxa yalokhu iphakheji elisha lama-hormone umuthi uyohlale kuqale izinombolo ezifanayo, futhi nyangazonke ngizoya mayelana usuku olufanayo lwekhalenda.
Iphakheji lokuqala umuthi "Jazz Plus"
Tablets (izibuyekezo bathini mayelana umuthi umphumela zabo ezinhle) kufanele kuthathwe kusukela osukwini lokuqala zokuya esikhathini. Lolu suku kuyadingeka ukuze baphuze amaphilisi ezifaneleke usuku olukhethekile phakathi nesonto. Ivunyelwe ukusebenzisa izidakamizwa ngoba umjikelezo wosuku-2-5, kodwa kulokhu, ukuthembeka umuthi Akukhona ukuba uphawu futhi zidinga ukuvikelwa okwengeziwe phakathi nesonto lokuqala.
Uma Ukushintshela kulo izidakamizwa Kwenziwa ejenti temlomo elihlangene, noma lwesitho sangasese sowesifazane indandatho umuthi patch, amaphilisi ama-hormone "Jazz" kudingeka baphuze ngosuku olulandelayo ngemva kokuthatha iphilisi eledlule asemaphaketheni amadala. Kulokhu, break phakathi edonsa amaphilisi ngeke. Uma izidakamizwa esifanayo, njengoba kulokhu, uma amaphilisi ngaphandle ketshezi esebenzayo, ukuqala ukuwamukela 'Jazz "kuyinto ukuba ngosuku olulandelayo ngemva kokuphuza iphilisi zokugcina asebenzayo we imithi wangaphambili. "Jazz Plus" amaphilisi (imiyalelo elikulo), nawe ungadla kamuva kancane, kodwa hhayi emva kuka ngosuku ukuthatha iphilisi zokugcina ngaphandle ketshezi asebenzayo.
Uma usebenzisa indandatho lwesitho sangasese sowesifazane, umuthi patch ukusetshenziswa kwezidakamizwa kufanele uqale ngosuku ukususwa iringi noma patch, kodwa hhayi emva kuka esikhundleni usuku umuthi. Ngokweyame yonke isidingo izindlela zokuphepha ezengeziwe ayisekho imithetho.
Uma ziye zasetshenziswa ngaphambilini nokuvimbela non-hybrid umkhiqizo temlomo equkethe kuphela progestogen (mini-iphilisi), ngemva kokuqedwa wavuma, ungaqala ukuthatha iphilisi "Jazz" ngosuku olulandelayo. Kuphela phakathi nesonto lokuqala, kuyodingeka baphendukele zokuvimbela inzalo eyengeziwe.
Uma kwathatha "Jazz" (zokuvimbela inzalo amaphilisi) bavela umjovo ukuvimbela ukukhulelwa okungafunwa, izimila noma ukukhulula progestogen Kuvunguza, reception amaphilisi kufanele uqale ngosuku lapho kufanele kwenzeke isingeniso elilandelayo umuthi nemijovo, futhi ngesonto lokuqala emva kokususwa Helix (nolwelwesi ). Ngesikhathi esifanayo udinga ukusebenzisa letengetiwe Ukuvikelwa.
Odokotela bavame elibekelwe abesifazane emva kokubeletha kusho "Jazz Plus". Izibuyekezo abonisa ukuthi liphinde uswidi. Kodwa singathathwa kuphela emva kokuphothulwa egcwele umjikelezo wokuqala. Uma kukhona kadokotela nguchwepheshe ke ukuyisebenzisa ekuseni.
Lapho ibele, ukuphuphunyelwa yisisu noma isisu ngemva sokuphuzisa kungenzeka ukuxoxa nge udokotela wezifo zabesifazane.
Yini iphakethe "Jazz"
Imininingwane kwi isembozo kusiza ukwenza okulungile ngokuthatha izidakamizwa "Jazz". Iqukethe amaphilisi 24 plus amane emgqeni wokugcina - placebo. Zonke zithutha kuthiwa ebiyelwe i ibhamuza aluminium. Leli bhokisi linezimpendulo ikhalenda nge imbobo eteyipini, okuvumela ukulawula izinsuku ngokuthatha izidakamizwa.
Ngaphambi amaphilisi ukukhetha strip ngosuku okuhambisanayo lweviki futhi ulisebenzise, ubekwe iphakethe sesimweni wabheka isandla sakhe "ukuqala".
Le isixazululo obusebenzayo uzobona usuku lwesonto, lapho ukuthatha iphilisi futhi awusoze miss yokwamukela esilandelayo.
Ukuqedwa futhi waphuthelwa amaphilisi
Uma wayefisa, futhi uma kuboniswe, nganoma yisiphi isikhathi, ungayeka zokuvimbela inzalo ngomlomo "Jazz Plus". I-Tablet izibuyekezo ngempela umxhwele, kumele ayifakiwe uma uhlela ukukhulelwa. Kulokhu, kufanele ulinde ukufika zemvelo isikhathi sokuqala lapho umuntu esesikhathini. Uma imithi wayeka ngesizathu esithile, kufanele ucele udokotela wakho mayelana analogs noma ezinye izindlela zokuvimbela inzalo.
Uma miss umthamo ke amaphilisi ngasebenzi kungukuthi kunakwe, kepha kumele ilahlwe kude ukuze ugweme isiphambeko uhlehlise isikhathi amaphilisi esingasebenzi. Nevypitaya ithebhulethi asebenzayo kusuka isikhathi esisukela 1st kuya osukwini 24 ngemuva kokulibaziseka amahora 12-36 umphumela umuthi asishintshi, kodwa kuyodingeka ngokushesha ngangokunokwenzeka ukuthatha imithi. Ukubambezeleka phezu amahora 12-36 iyehlisa umphumela umuthi zomuthi "Jazz". Izibhebhe more ezingabanjwanga, sisondelene ziyinkathi ekutholeni amaphilisi alisebenzi futhi kuza awokuthi kokukhulelwa.
Uma ezingabanjwanga ukuthatha izidakamizwa kusukela 1st kuya osukwini 7th lomjikelezo, udinga ukuthatha iphilisi ngesikhathi inkumbulo lokuqala, ngisho noma usuku ngabe kufanele uphuze amaphilisi amabili nje. Esikhathini esizayo, kufanele uthathe amaphilisi njengenjwayelo. Kuwo wonke ngesonto elizayo kubalulekile ukusebenzisa zokuvimbela inzalo eyengeziwe.
ithebhulethi Uphuthelwe esigabeni ne 8 th usuku th 14 ukuphuza ngokushesha lapho ukhumbula owesifazane, ngisho noma kufanele uphuze amaphilisi amabili ngesikhathi esisodwa. Ngaphezu kwalokho, lowo muthi wenziwa umbuso odlule. Isidingo umuthi ezengeziwe ubalekela ne ngalo mbandela wokuba leyo izidakamizwa esithathwayo ngaphansi kohlelo izinsuku eziyisikhombisa ngaphambi amaphilisi asebenzayo aphuthelwe. Uma ngaphambi kwakukhona iqiniso ukudlula izidakamizwa, kubalulekile ukusebenzisa letengetiwe umuthi.
aphoyintimenti Uphuthelwe esikhathini kusuka 15 th-24 ngosuku th impela ingozi eliphezulu ukukhulelwa okungafunwa. Uma, phakathi nesonto elandulele usuku uphuthelwe, wonke amaphilisi angiphe wona zithathwa kahle, awukwazi ukusebenzisa zokuvimbela inzalo eyengeziwe. Uma kungenjalo, kufanele usebenzise izinyathelo zokuzivikela ngesonto elilandelayo. I-Tablet kunoma isiphi isimo kufanele esiphuza ngokushesha ngangokunokwenzeka, ngisho noma kufanele uphuze amaphilisi amabili ngesikhathi esisodwa. Ukuhlala amaphilisi asebenzayo asetshenziswa ngokuqinile ngokwesimiso sansuku, futhi akusebenzi kulahliwe. A shintsho kungalindelekile amaphilisi asebenzayo kusuka iphakheji elisha. Ngalesi sikhathi, lapho kungenzeka ukubeka amabala. Ukopha ingekho kuze ngemuva yokwamukela iphakethe lesibili.
Ungakwazi okwesikhashana ukuyeka ukuphuza iphilisi, kodwa izinsuku kungekho lemine. Lokhu kumele kufakwe futhi izinsuku ziqhubeka izidakamizwa. Qhubeka ephethe izibhebhe kumele tisukele iphakethe entsha.
Umuthi 'Jazz "kungabangela inombolo okuba nemiphumela engemihle. Lokhu, ngaphezu kwakho konke, ukushintshashintsha kwemizwelo, amehlo ukucindezeleka, isicanucanu, ukuhlanza, ubuhlungu endaweni webele, migraine, ukufohla lesizalo ukopha, kwehle libido, pooling eyeqile lwemithambo thrombosis, kahle isibindi umsebenzi, umfutho wegazi ophezulu okhuphuka ngokungazelelwe.
Ezimweni ezingavamile, isimila kwebele. Kukhona izimila benign nesibulalayo esibindini. Futhi anda ingozi pancreatitis asathuthuka, erythema nodosum, umfutho wegazi ophakeme.
Ukuthola izinto zokuvimbela inzalo okwenza isimo lesiguli e-jaundice, ukulunywa kubangelwa kumiswa cholestasis, amatshe atholakala enyongweni, porphyrin isifo, omzimba izicubu erythematosus, eSydenham chorea, angioedema, isifo Crohn, chloasma.
Okwamanje, ngomlomo izinto zokuvimbela inzalo hormone eziningi, kodwa labo bayakwazi esikhundleni izidakamizwa "Jazz", abambalwa kuphela. It imithi:
Ziqukethe ncamashi isithako esebenzayo efanayo futhi umthamo ofanayo hormone, njengokuthi "Jazz". Tablets (analogs) makhulu okufanayo. Zinciphisa izinga lama-hormone besilisa babe izakhiwo anti-androgenic. Ngokuphelele ukuvikela ukukhulelwa okungafunwa. Umehluko phakathi kwabo itholakala izinkampani yokukhiqiza. amanani zabo zihlukene phakathi ruble 700-1000, plus noma lokususa 50-300 ruble. Umuthi 'Jazz' kubiza ruble abacela ku-750 pack of amaphilisi 28 ngalinye.
Izibuyekezo zokuvimbela inzalo
"Jazz" kuyinto imithi yesimanje, kodwa izibuyekezo ukuba bube khona ngempela impikiswano. Abaningi balithatha isikhathi eside futhi ngeke ushintshe ngakolunye. Phakathi nalesi sikhathi, abesifazane ngcono isikhumba nezinwele, encishisiwe ubuhlungu besisu ngesikhathi premenstrual, hhayi sokukhulelwa livelile. Ezinye zazo waphawula ukwanda isisindo ngenkathi ngokuthatha izidakamizwa, "Jazz." Tablets (impendulo evela odokotela waphinda ukuqinisekisa ukusebenza yabo futhi unake Izimo) kube nomthelela omubi libido. It is noma banyamalala ngokuphelele noma kwehle kakhulu. Ngemva izidakamizwa ekuphathweni babonakala nyangazonke ukubambezeleka osenyameni ensundu nokuvuvukala webele.
Ngakho eziningi umuthi akuzange wasondela okubangelwa ukunyuka komfutho wegazi, ubuhlungu bekhanda, izinguquko njalo kwemizwa, ukungakhululeki, ukopha. Lesi sigaba sabantu ukuze ugweme imiphumela engemihle, it is kakhulu Kunconywa ukuthi uhlolwe ukuba kudlule bonke ukuhlolwa ezidingekayo futhi njalo uthintane udokotela wezifo zabesifazane ngaphambi kokuthatha lesi izidakamizwa.
Nokho iphilisi "Jazz" ukwazi indlela yokubhekana ngokuphumelela nge imisebenzi eyabelwe kubo futhi bavikele abesifazane kusukela ukukhulelwa okungafunwa, ukuthi nje baqinisekisa izinkulungwane izimpendulo zabesifazane.
Umuthi 'Abyufen ": yokusetshenziswa, ngempela
Kusukela kwalokho okukhiqizwa nokuthi ukhilimu "Ahromin" isetshenziswa?
Izidakamizwa "Bromocriptine": isitatimende
Shampoo nezintwala nit angu "Higiya": ukubuyekezwa. "Higiya": Umhlahlandlela intengo
Umlobi ZIFA Kadyrov: Biography, lokusungula
Ukusiza abalimi. Indlela yokubhekana eziyinsungulo engadini?
Daewoo nexia - impendulo kubalulekile!
Self-eziyihaba amacansi - a imfanelo edingekayo emkhankasweni
Female jackets phansi "baone": izingubo ezisesitayeleni okwesikhathi ebusika ukhululekile
Yimuphi umthandazo ngeSonto sifundze ngenkonzo yethempeli ekhaya?
Entsha Volkswagen Caddy. Uhlolojikelele